कोरोनाको औसधी बारे भर्खरै नेपालमा पनि आयो यस्तो खुसिको खबर सबैले पदनै पर्ने कुरा – News Np Online
मुख्य पृष्ठ /Intresting/कोरोनाको औसधी बारे भर्खरै नेपालमा पनि आयो यस्तो खुसिको खबर सबैले पदनै पर्ने कुरा
आयुर्वेद चिकित्साप्रति मानिसको विश्वास गुमिरहेको समयमा कोरोना सङ्क्रमण भएका बिरामीलाई भने आयुर्वेदिक औषधिले फाइदा गरेको छ । कीर्तिपुरस्थित आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रमा भर्ना भएका कोरोना सङ्क्रमित ३३ जना सात दिनमै निको भएर घर गएका छन् । अरु पनि निको भएर जाने क्रम बढ्दो छ। आयुर्वेद अनुसन्धान अस्पतालका अनुसन्धान अधिकृत डा. अमितमान जोशी भन्छन्, ‘आयुर्वेदिक औषधिमा विभिन्न रो’गप्रतिरोध क्षमता बढाउने जडीबुटीको प्रयोग हुने भएको कारण कोरोनासँग लड्न सक्ने क्षमता चाँडो विकास भई निको भएको हो । पूरा भिडियो हेर्न तलको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोला
उहाँका अनुसार कोरोना सङ्क्रमणका कारण भर्ना भएपछि आयुर्वेद विज्ञ चिकित्सक टोलीबीच छलफल गरी श्वा’सप्रश्वाससम्बन्धी रो’गमा प्रयोग हुने र रो’ग प्रतिरोधी क्षमता बढाउने जडीबुटी मिलाएर बनाइएको औषधि सेवन गर्न दिइएको थियो । त्यसको सात दिनपछि पीसीआर परीक्षण गराउँदा सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको डा.जोशीले जानकारी दिए। यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला
केसी भन्छन्, ‘अस्पतालको व्यवस्था धेरै राम्रो छ । कोठा तातो पानीको व्यवस्था थियो र दैनिक रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउने आयुर्वेदिक औषधि दिनको तीन पटक खान दिन्थ्यो ।’ आठ दिनमा नै कोरोनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि घर फर्केको जानकारी दिँदै थपे, ‘हाल हर्बल चिया र चेवनप्रासको सेवन गरिरहेको छु । अहिले म आफूलाई स्वस्थ्य र बलियो पनि महसुस गरिराखेको छु । यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला
गत असार २५ र २६ गते भर्ना भएका उनीहरू एक हप्तामै डिस्चार्ज भएको अस्पतालले जनाइएको छ । डा.जोशीले पहिलोपटक भर्ना भएका २० जना कोरोना सङक्रमित व्यक्तिहरू सबै डिस्चार्ज भएकाे बताउनुभयो । त्यसलगत्तै दोस्रोपटक पनि २० जना भर्ना भएकाे थियाे । जसमा १४ जना डिस्चार्ज भइसकेको जानकारी दिए। यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला
आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रका चिकित्सक तथा कोभिड-१९ का संयोजक डा. जितेन्द्र श्रेष्ठले हाल अस्पतालमा १६७ जना रहेको जानकारी दिँदै थपे, ‘पुरुष १२१ र महिला ४७ जना उपाचारमा रहनुभएको छ । उहाँहरूलाई पनि सोही औषधिको प्रयोग गरिरहेका छाैँ । सबैको अवस्था सामान्य नै रहेको छ । यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला
बिहे पछि युवतीमा देखा पर्ने7परिवर्तन ! हेरेक पुरुषले जान्नु पर्ने, share गरौ
रमेश प्रसाई र नन्दा सिंह सँग विवहा हुने पक्का भए पछि कल्पना दाहालले गरिन् खुला’सा (भिडियो सहित हेर्नुहोस्।)